Muxuu iisu casilay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Trump u joogay Suuriya ? - BBC News Somali
Mr McGurk (bidix) ayaa mar sii horreysay sheegay iney ciidamada Mareykanka sii joogaan Suuriya
Sargaal sare oo ka tirsan Mareykanka una qaabilsan dagaalka lagula jiro ururka isku magacaabay dowladda islaamiga ee IS ayaa ka gaabsaday go'aanka madaxweyne Trump uu ka qaatay inuu ciidamadiisa uu kala baxo dalka Suuriuya.
Brett McGurk, oo ah Ergeyga gaarka ah ee mdaxweynaha dalka Mareykanka u qaabilsan isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaallanka IS, ayaa wuxuu ka biya diiday go'aanka Madaxweyne Trump uu ku sheegay iney cidamadiisu ka soo baxayaan Suuriya, McGurk oo ku baaqay inuu Mareykanka uu sii wado dagaalka uu kula jiro IS.
Go'aanka Trump uu ka dhawaajiyeyna waxaa daba socotay iscasilaaddi xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka General Mattis.
Horraanti bishan December oo uu warbaahinta u warramay ayaa wuxuu sheegay "iney doonayaan iney howlgalkooda sii wadaan ilaa ay xaqiijiyaan xasilooni buuxda iney ka abuurantay Suuriya".
Masuulka sare ee Mareykanka ee iscasilay
McGurk iscasilaaddiisa muxuu ka yiri?
Wargeyska New York Time oo soo xigtay farriin E-mail uu McGurk soo diray ayaa sheegtay inuu farriintiisa uu ku sheegay go'aanka la bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya "ay argagax ku abuurtay gabi ahaanna ay ka soo horjeedda siyaasadda dalka u yaallo".
Wuxuuna ugu dambeynti McGurk uu sheegay "inuu amarka cusub ee uu bixiyey madaxweyne Trump uu qaadan karin oo uu ka doorbiday inuu sharaftiisa ilaashado sidaana isku casilay."
Madaxweyne Trump Muxuu yiri?
Madaxweyne Trump wuxuu maalinti Arbacada uu ku dhawaaqay inuu 2,000 oo askari oo Ameerikaan ah oo ku sugan Suuriya uu gabi ahaan la soo baxaya isaga oo go'aankiisaasi sabab uga dhigay in IS laga guuleystay.
Wuxuuna maalinta Sabtida uu madaxweyne Trump markale uu ku adkeystay go'aankiisa ah iney ciidamadiisa ka soo baxaan Suuriya, isaga oo weliba carrabka ku dhuftay in IS laga guuleystay.
Go'aanka madaxweynaha waxaa sida oo kale ka hor yimid xubno sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo beesha caalamkaba.
Kooxda Isbahaysiga ee ay Kurdiyiintu hoggaaminayaan iyo Xoogagga Dimuqraadiga ee Suuriya (SDF) ayaa sida oo kale ka mid ah dhinacyada go'aanka madaxweynaha ka so horjeestay iyaga oo sheegay haddii ay ciidamada Mareykanka baxaan Suuriya iney dib iisu soo abaabulayaan kooxda IS.
Trump ma ku saxan yahay inuu yirahdo IS waa laga guuleystay?